MSF Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Tan iyo horraantii 2008da ayaa Soomaaliya waxa ay noqotey mid ka mid ah dalalka aadka u kooban ee MSF aaney mar kasta awood u lahayn in ay uga shaqeeyaan shaqaale caalami ah oo si joogta ah u jooga gudaha dalka. Mashaariicdeenna waxaa wada shaqaale Soomaaliyeed oo dadaal badan.
“Shaqaalaha dalka u dhashey ayaa ah laf-dhabarta shaqada MSF ee dhammaan dalalka. Soomaaliya, ayaa shaqaalhani ay sidoodii yihiin, sahayduna ay sideedii tahay oo dadaalka MSF uu ku gargaarayo dadka Soomaaliyeedna uu sidiisii yahay, in kasta oo ay nabadgelyo-xumadu ay ku sii kordheysey dalka”.
Cabdikarim Daahir, Kaaliyaha Madaxa Ergada dalka Soomaaliya.
Mashaariicda MSF ee Soomaaliya waxaa wada kooxaha maareynta ee xaruntoodu tahay Nayroobi. Kooxahan ayaa gaara dhammaan go’aamada ugu waaweyn ee la xiriira hawlaha MSF ee Soomaaliya waana booqdaan si ay gacan, tababar iyo taageero, u bixiyaan mar kasta oo uu ammaanku saamaxo.
“Soomaaliya adeegyada caafimaad ee ay bixiso waa ay iska kooban yihiin haddana baahiyaha caafimaad ee ba’an aad ayaa ay u badan yihiin…. Shaqaalaha caafimaadka ee tababaran aad ayaa ay ugu yar yihiin guud ahaanba Soomaaliya, dhinaca koonfureed ee dalka oo ay rabshado xumi ka jireenna waa haddiiba cid laga helo waxaana jirta in dadkii tababarka haystey iyo kuwii lahaa xirfadaha qiimaha leh ay ama tageen dhinacyo xoogaa deggan ee isla dalka ah ama ay dalka ka tageen iyada oo ay sababtuna tahay iyaga oo leh xirfad qiimo leh oo ay meel kale oo ammaan ah kaga shaqeysan karaan. Sidaa daraaddeed waxa aan ku khasbanaaney in aan tababarno shaqaale badan annaga oo ka soo bilowney meel aan waxba jirin oo aan raadinno dad wax akhrin kara waxna qori kara oo aan kobcinno si aan uga dhigno shaqaale qaran oo awood u leh in ay qabtaan badi hawlaha xarumaha caafimaadka marka aan maqannahay..”
Colin McIlreavy, Madaxii Hore ee Ergada, Soomaaliya